Ogaden News Agency (ONA) – Hiigsiga Xoriyada iyo Xidhiidhka Kadhexeeya Falsafada Hanka Q2
Hiigsiga Xoriyada iyo Xidhiidhka Kadhexeeya Falsafada Hanka Q2
Waxaynu dhexdda kagajirnay hanka iyo himiladda shacabka Soomaalida Ogadenia uu meel fiican marayo marka loo fiiriyo daruufaha adag ee kuxeeran halganka Soomaalida Ogadenia. Guusha iyo guuldaradda waxaa udhexeeya fasiraad marka hore loo baahanyahay innaynu isla garano. Guushu waxay kutimaadaa safar dheer iyo adkeysi loo wadda dhanyahay , isla markaana lagga ilaalinayo xanaf iyo laab lakac kusaleysan hab dhaqanka ay caadeysteen maal mahan danbe aqoon yahankii Soomaaliyed ee aaminsan innay cirka iyo dhulka kala hayaan.
Sideynu lawadda socono waxaa jirra xanuuno badan oo kudhaca caloosha silamid ah ayey maskaxdu udacarowdaa, haba kala duwanaadeen qaabka qarastu ugu dhalato iyo waxa ku keena. Hadaba hadii qarasta calooshu ku dhalato ruuxa oo raashin qashin cuna, ooy ugu biirto caloosha oo taagan, qashinka calooshiisa galayna meel uu kaboxo waayo, sidaas si lamid ah ayaa maskaxda qarasta ku dhalata waxaa keena, markii sixun oo khaldan ruuxa maankiisa wax loogu shubo, qashinka galayna meel uu kaboxo waayo, dabadeedna maskaxda quful lagu jabiyo! Halkaas waxaa kabilowdaa ifaafaalo xanuun maskexeed iyo mid caloosha ruuxa ku dhaca oo sababa ilaa geeri ama dhimasho ?
Ma haboontahay innay su,aallo kala duwan miiska soo saarno goorwalba ? Waa mihim jidan innaynu fikirno, xisaabtano, doodno, aragti guud yeelano innagoo dhisayna gurigga filadda ah ee dhamaanteen mustaqbal fiican u noqondoono jiilka maanta jooga iyo kuwa soo socda mustaqbalka fog. gurigaasi filadda ah wuxuu doonayaa wax badan oo maanta gacanta luguheynin balse loo baahan yahay innaynu diyaarino hankii iyo himiladii lugu dhisi lahaa – OGADEN GREEN VILLA – falsafada nolasha waxaa saldhig u ah halgan iyo himilo aan kala joogsi laheyn , waana jihooyinka ay ONLF maanta ku hogaamineyso shacabkeeda dulman. John Mep, 1938–2009 – wuxuu ahaa , radical philosophy. wuxuuna kahadli jiray xaquuqda shacabka SCOTLAND iyo IRELAND. wuxuuna aaminsanaa inn xoriyadu ku iman karto jihooyin kala duwan balse marka hore lagga maar maan tahay inn lahelo urur u taagan damaca iyo aayatiinka shacabka markaasi doonaya innay ku noolaadaan xoriyad iyo sharaf. Mr John wuxuu daruus ka bixin jiray jaamacadda GLASGOW UNIVERSITY. Marar kaladuwan ayaa lugu weeraray saxaafada BBC,waxaana lugu eedeeyay inuu yahay macalin ardeydda si kalle duruus usiiya. Mr john isagoo jawaab ka bixinaya weerarkii BBC wuxuu yiri siddan.
Philosophy can also play a transformative role in our lives and social institutions. Through critical reflection on the justification and coherence of the values in social practices and our own actions.
Falsafadu waxay door mihim ah ka ciyaartaa isbadalka nolasheena bulsho iyo haykalka dhismaha xarumo si adag loogu turxaan bixinayo qiyamka iyo bulshada dhaqamada tallaabooyinka noo gaar ah. Falsafadu waxay goorwalba ka hadleysaa dareenka maanta taagan ee loo baahan yahay innaynu si wada jir ah uwadda maareyno howsha halganka. waxaynu la soconaa dhaqaalaha tiradda badan ee la siinayo TPLF. sidaasi oo ay tahay, Waxaynu la soconaa fariimaha kala duwan ee shacabkeenii gudaha soo gudbinayaan, isla markaana leeyihin guusha waxay ku jirtaa gacanta ONLF, ee samir iyo dulqaad howsha ku fuliya. Waqtigan la joogo maanta, nolosha waxay noqotay mid garasho fog la’aanteed lagu fashilmayo. himiladda qorsheynta mustaqbalka fog ayaa ah barta ay ka saan qaaday nolosha casriga ah. Bulshadii aan falsafadda qorsheynta mustaqbalka adeegsan waxay gacanta ugu jirri gumeysi, kamana bixidoonta kolba inn maal galin lugu sameeyo koox ama shaqsiyaad meel soke ka raadinaya mustaqbalka iyo guusha halganka S/ ogadenia.
La soco Q/kalle 3.